Ukwelashwa Ngobunzima – Ngokuqeda imikhuba kanye nokuqeda ukuthinta – اموزش یک
خانه / the health / Ukwelashwa Ngobunzima – Ngokuqeda imikhuba kanye nokuqeda ukuthinta
Ukwelashwa Ngobunzima – Ngokuqeda imikhuba kanye nokuqeda ukuthinta
Ukwelashwa kakhulu kwezindlela zokudla ezimbi Ukudla okungalungile, ngaphezu kokukwazi ukudala izimo ezinjenge-nausea kanye nobuhlungu besisu kungathinta isimo sethu sengqondo, kubangele izimo ezinjengokungahambi kahle, ukuguquguquka kwemizwelo, ukwehlukaniswa kwezizwe, ulaka, ulaka noma ngaphezulu Isebenza. Uma uhlushwa ukuguquguquka kwemizwelo, hlela ukudla okudlayo usuku lonke ukuthola ubudlelwano phakathi kokudla okudlayo nokushintshana kwemizwa yakho.
Uma ufuna ukujabula futhi ujabule ngokwengeziwe, shintsha ukwakhiwa kwekhaya lakho ngoba imvelo inomthelela omkhulu esimweni sethu sokuphefumula. Isibonelo, ubomvu bungenza abantu bangacasuki futhi babe novalo, kanti ophuzi kudala injabulo futhi uluhlaza okwesibhakabhaka udala ukuthula. Ucwaningo luphinde lukhombise ukuthi ukusebenzisa izithombe eziphumuzayo, njengezindawo ezinhle, kuzoba nomthelela omuhle esimeni sethu futhi kunciphise ukucindezeleka nezinxushunxushu.
Abaningi bethu baphupha ngezibuyekezo, kepha iqiniso ukuthi sicabanga ukuthi alithembisi. Abaphenyi baseNyuvesi yaseWarwick bathole ukuthi lapho umsebenzi enyuswa, ingcindezi nengcindezi yakhe kuyathothiswa futhi impilo yakhe yengqondo ibeka engcupheni.
Uma ubukela i-TV yakho njalo noma ufunda lapho ulele, bukela imiphumela yezinzwa zakho nemizwelo ngakusasa. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukukhanya ebusuku kungaba yisithiyo ekukhiqizweni kwe-melatonin, i-hormone ethinta imizwa yabantu. IMelatonin ikhiqizwa ebumnyameni kuphela, ngakho zama ukusebenzisa amakhethini aminyene ekhaya lakho bese ucima wonke amalambu ngenkathi ulele.
Ukushoda kokudla okungenamsoco
Kunezici eziningi ezingaholela ekucindezelekeni, kepha ngasikhathi sinye, ukudla kungakwenza ukudana kube kubi noma kube kubi. Ukuntuleka kwamavithamini D, amavithamini B nama-omega-3 fatty acids kungaholela ekucindezelekeni kanye nasenxekweni. Ngakho-ke zama ukufaka lezi zakhi zomzimba ekudleni kwakho.
Ungacabangi ukuthi ukuchitha isikhathi nabangane kuyindlela enhle yokuthola okuhle, noma kunjalo, konke kuncike esimweni sabo sokuzwa. Ngokusho kwabaphenyi, imizwa yethu (emihle noma emibi) iyathathelana futhi kwesinye isikhathi idluliselwa isuka komunye umuntu iye komunye singayazi. Kuyamangaza ukuthi kwesinye isikhathi ngisho nangaphandle kokubona abangane, sithonywa yimizwa yabo. Isibonelo, ucwaningo oluthile luveze ukuthi abasebenzisi be-Facebook bangathonya abasebenzisi izinsuku ezi-3.
Abaningi bethu bayazi ukuthi ukuntuleka kokulala kubangela ukukhathala, kepha abacwaningi bathi ukulala nje ukulala nje. Labo abalele emuva bathambekele ekucindezelekeni, noma ngabe balale. Ngakho-ke zama ukulala ekuseni kakhulu, futhi-ke, balale ngokwanele.
Abaphenyi bathi abesifazane abanamaphilisi okuvimbela inzalo kungenzeka ukuthi bahlaselwe izifo ze-gynecological. Kwabanye besifazane, la maphilisi futhi abangela izimo ezinjengokushintshwa kwemizwa nokulahleka kwe-libido.
Sonke siyakwazi ukuthi ukubhema kukhulisa ubungozi bomdlavuza, isifo senhliziyo kanye nokuqala kokuqala. Kepha kuyathokozisa ukwazi ukuthi ukubhema kuthinta impilo yabantu engqondo. Abaphenyi baseNew Zealand bathola ukuthi ababhemayo nabayimilutha ye-nicotine bacindezelekile kakhulu kunabanye.
Kukhona ubungozi bokuphazamiseka kwesikhathi sonyaka ezinsukwini zobusika obumnyama, kodwa bewazi ukuthi ilanga lingaphinde lenze abantu bakhathale futhi bacindezeleke? Yize ukuphazamiseka okukhona ehlobo kuthinta kuphela i-1% yabantu, izinkinga ezinkulu njengokuqwasha, ukulahleka kwesifiso sokudangala nokudangala kuvamile.
Imbangela yokuqala yokukhathala: ukudangala nokuxineka
Uma uzizwa womile futhi ufuna ukwenza noma yimuphi umsebenzi, uzokhungatheka futhi ujabulele umsebenzi owadla isikhathi, futhi ungazizwa ukhathele futhi uphatheke kabi; ezimweni eziningi, ungakhungatheka ukuthi Ukukhathazeka noma ukudangala kuyabuya. Abantu abathola lezi zimo ezimbili bakhathele kakhulu futhi ngokushesha baba novalo ngenxa yomkhawulo wokubekezelela okuphansi. Yazi futhi ususe izimpawu zokuxineka.
Ukucindezela ngokweqile futhi isikhathi eside kunciphisa ukugxila nokukhungatheka. Zama ukujwayela ngamasu wokulawula ukucindezela. Ukugijima esikhundleni sokufuna ukwenza izinto ngokuphelele futhi ubheke abagijimayo abaphezulu, kuyancipha ukubhekabezitha futhi mancane amathuba okucindezela ingcindezi encane.
Uma ufuna ukuba nempilo futhi uthokoze, bhekisisa indawo okuhlala kuyo futhi ushintshe ukwakheka kwekhaya lakho ukuthuthukisa umoya wakho.
Gwema ukulala ngokweqile, ukudla ngokweqile, nezinye izinto ezivilaphayo nentando ebuthaka.
I-11- Ukwehluleka ukwenza izinqumo nokubambezeleka ezenzweni kuholela ekulahlekelweni kwezinzuzo eziningi ezingokomoya nezingokwenyama okungaholela ekulahlekelweni okuningi.
Khumbula ukulungisa izinqumo ozidingayo ukwenza isilinganiso sakho sangaphambilini futhi unake iqiniso lokuthi usukulungele ukwenza izinto ezibalulekile zesikhathi esedlule.
13 – Qikelela ezinqumweni nasekwenzeni imindeni, ukhule kahle ukuze ube nesibindi sokusebenza kanzima uqinise nokwenza izinqumo nokusebenzisa kwakho.
Ungakhohlwa ukuvivinya umzimba njalo, okusebenza kakhulu ekuqiniseni intando.
Ngokwenza izinqumo ezilula ngemisebenzi elula, ikhulisa kancane ukuzethemba nokuhlomisa futhi ivule indlela yezinqumo ezinzima nezinkimbinkimbi.
Imbangela yesibili yokukhathala ukungondleki kahle
Imikhuba emibi yokudla ithinta isimo sethu sengqondo
برچسب‌ها:Akunamahloni, ukudana in english, ukudana nazo
قبلی : Tratamentul plictiselii – prin eliminarea obiceiurilor și atingerile finale
بعدی : 退屈治療-習慣をなくし、仕上げを仕上げる